Akwụkwọ Nazi Nazi Germany
Isi okwu Nazi Germany - Adolf Hitler
Nchịkọta ndị Nazi Germany - mmalite ọchịchị Nazi
Nazi Germany crossword - ndụ na ọrụ
Nazi German crossword - si malite na Nazism
Isi okwu Nazi Germany - amụma ndị agbụrụ
Nazi Germany crossword - ụzọ agha
Isi okwu Nazi nke German - Ndị Weimar Republic
Nazi German crosswords
Nazi Germany akwụkwọ
Ajụjụ Nazi nke Nazi Germany
Nchịkwa ncheta Nazi Germany - ọnụ ọgụgụ ndị Nazi
Ihe ncheta nke Nazi Germany - ihe omume 1918-23
Ihe ncheta nke Nazi Germany - ihe omume 1924-32
Ihe ncheta nke Nazi Germany - ihe omume 1933-39
Ihe ncheta nke ndi Nazi Germany - iche iche
Ihe ncheta ncheta nke Nazi Germany - echiche
Ihe ncheta ndi Nazi Germany - ndi isi
Ihe ncheta ndi Nazi Germany - okwu na echiche (I)
Ihe ncheta nke ndi Nazi Germany - okwu na echiche (II)
Ihe ncheta nke Nazi Germany
Ajụjụ Nazi Nazi Germany - atumatu akụ na ụba
Ajụjụ Nazi Nazi Germany - Hitler
Ajụjụ Nazi Nazi Germany - ndụ na ọrụ
Nazi Germany ajụjụ - amụma agbụrụ
Ọkpụkpọ Nazi Germany - steeti ndị Nazi
Ntinye Nazi Germany - NSDAP
Ajụjụ Nazi nke ndị Nazi - ụzọ maka agha
Ndị Nazi Nazi ajụjụ - ndị Weimar Republic
Nazi Germany jụrụ
Isiokwu ndị Nazi Germany
Nazi Germany onye bụ onye
Nkọcha okwu Nazi Germany - echiche
Akwụkwọ akụkọ Nazi Germany - ndị mmadụ
Akwụkwọ akụkọ Nazi Germany - ebe
Nkọcha okwu Nazi Germany
Akụkọ nke Nazi Germany akpaliwo mmasị ma na-awụ akpata oyi n'ahụ ọtụtụ nde mmadụ. Ọ malitere site na ọdịda nke Weimar Republic wee jedebe na ihe egwu nke Agha IIwa nke Abụọ na Oké Mgbukpọ ahụ. N'etiti, Ọchịchị Ndị Nazi pụtara ọtụtụ nde mmadụ ma gbanwee ụzọ akụkọ ihe mere eme nke oge a.
Ndị Nazi bụ otu ndị otu mba nwere oke ụjọ nke hiwere otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke ha na 1919. Ọ bụ onye Adolf Hitler, onye bụbu corporal onye jerela ozi na Agha Iwa Mbụ, ndị Nazi ka dị obere ma bụrụ ndị na-abaghị uru maka ọtụtụ ndị 1920.
Mmalite nke akwa Iduọ Ndutịm Uforo na nsonaazụ ya na Germany hụrụ ka Hitler na ndị Nazi na-enwetakwu nkwado. Ndị Nazi gosipụtara onwe ha dịka nhọrọ ọhụrụ na nke ọzọ maka ndị German na-enweghị olileanya. Ma, odi ihe banyere Hitler na ndi Nazi. Ọtụtụ n'ime nchekwube ha - ikike steeti, ikike ọchịchị, ikike ịhụ mba n'anya, Darwinism ọha, ọcha agbụrụ, nkwado ndị agha na mmeri - bụ echiche nke oge gara aga, ọbụghị ọdịnihu.
Site na 1930, ndị Nazi aghọọla ndị otu kacha ibu na German Reichstag (nzuko omeiwu). Nkwado a nyere aka na nhọpụta Adolf Hitler dị ka onye isi na Jenụwarị 1933.
Hitler na ụmụazụ ya jisiri ike afọ ole na ole mana mmetụta ha nwere na Germany buru nnukwu ihe. N'ime afọ ole na ole, ndị Nazi egbupụrụ ọchịchị onye kwuo uche ya mepụtara otu oke ọchịchị aka ike.
Ndụ ọtụtụ nde ndị Jamani gbanwere, ụfọdụ ka ọ ka mma, ọtụtụ maka njọ. Women E nyere iwu ịlaghachi n'ụlọ na ewezuga onwe ha na ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ebe ọrụ. Children e jiri echiche Nazism tinye ha na ya. E gbanwee ụlọ akwụkwọ na ebe ọrụ iji mezuo ebumnuche ndị Nazi. Ndị na-adịghị ike ma ọ bụ ndị na-akpaghasị mmekọrịta ma ọ bụ agbụrụ - si Ndị Juu na na-arịa ọrịa uche - ewepụrụ ma ọ bụ kpochapụ.
Ndị Nazi jikwa ụwa asọpụrụ na - atụgharị agha Nke ahụ duje Germany banye n'Agha Iwa Mbụ afọ iri tupu mgbe ahụ. N'ikpeazụ, na ngwụsị 1930s, Hitler setịpụrụ banyere ịgbasa ókèala German, amụma nke butere agha kachasị njọ na akụkọ ihe mere eme mmadụ.
Weebụsaịtị nke Alpha History nke Nazi Germany bụ ezigbo akwụkwọ ọgụgụ maka akwụkwọ maka ịmụba ịrị elu nke ndị Nazi na Germany n'etiti 1933 na 1939. O nwere ọtụtụ narị ụzọ mmalite na nke abụọ dị iche iche, gụnyere nkọwa zuru ezu nchịkọta edemede na akwụkwọ. Ebe nrụọrụ weebụ anyị nwekwara ihe ederede maka nghazi, okuko, a 'onye bụ onye' na ozi na akụkọ ihe mere eme. Studentsmụ akwụkwọ nwekwara ike nwalee ihe ha maara ma cheta ọtụtụ ihe dị n'ịntanetị, gụnyere nyocha, ntụgharị okwu na okwu. Isi mmalite, edepụtara ihe niile dị na akụkọ Alfa site n’aka ndị nkuzi ruru eru ma nweekwa ahụmahụ, ndị ode akwụkwọ na ndị ọkọ akụkọ ihe mere eme.
Nhọrọ dị ukwuu